AMBATOFINANDRAHANA : Vehivavy roa nalain’ny dahalo miisa 600 ho takalon’aina
Mandry tsy lavoloha hatrany ireo mponina ao amin’ny Distrikan’ Ambatofinan-drahana noho ny fanafihan-dahalo mahery vaika saika ho isan’andro. 10 août 2017
Dahalo tokony ho eninjato lahy tany ho any indray no tonga nanafika tao amin’ny Kaominina Mandrosonoro, telo andro lasa izay.
Tapitra lasa avokoa ny omby an-jato tao amin’io toerana io. Etsy andaniny izay, dia ankizivavy roa zanaky ny tompon’omby ihany koa no lasan’izy ireo natao takalon’aina raha ny fanazavana voaray avy any an-toerana. Efa navotsotr’ireo malaso ihany ireto ankizy ireto, omaly.
Mbola mitohy hatrany fanarahan-dia ataon’ireo fokonolona sy ny Zandary satria mbola tsy misy tafaverina ireo omby ireo hatramin’izao. Fantatra ihany koa aza fa vao omaly maraina tokony ho tamin’ny sivy ora tany ho any dia efa nisy voatafika sahady ny tao amin’ny tanànan’Ambalanivo sy Ambalambony ka lasa daholo ihany koa ireo omby.
Misedra olana tanteraka araka izany ireo mponina, ka mitaraina izy ireo noho ny firongatry ny fanafihana misesisesy.
Manampy trotraka, hoy izy ireo, ny fanaovana takalon’aina ireo zaza, ka vao mainka mihorohoro fatratra ireo fokonolona. Manoloana izay dia nilaza ny Kolonely Randrianarivelo Anicet miasa ao amin’ny faritra fa “ tsy maintsy hiara-hiasa ireo mpitandro filaminana miadidy ny Faritra Matsiatra Ambony sy Toliara. Marihina mantsy fa ireo toerana ireo no tena misy kizo falehan’ireo dahalo ka itrangan’ny asan-dahalo matetika, ka hisy ny fanarahan-dia amin’ny lalana efa mahazatra ireo dahalo ato ho ato. Hiezaka izy ireo hitady vahaolana hamerenana ireo omby lasan’ireo malaso nandritra ny telo andro nifanesy izay”.
Raha ny fitarainana voaray momba ny asan-dahalo hatrany dia vao afak’omaly ihany koa ny tao amin’ny Distrikan’Ihosy no nisy asan-dahalo, ka omby miisa enim-polo no lasa tamin’izany. Andrasana hatreto ny fanarahan-dia faobe ataon’ireo Zandary miadidy ireto Faritra roa tonta ireto .
Tratra niaraka tamin’ny basy sy odigasy i Alain, jiolahy raindahiny ANKAZOBE (663) 21 janvier 2021 Mila vola hatrany amin’ny 75,9 tapitrisa dolara KERE SY HAINTANY ANY ATSIMO (356) 19 janvier 2021 Nakorain’ireo mpijery ny Ben’ny tanànan’Antsiranana FANDRAVANA LALAO (158) 19 janvier 2021 Trano 50 tafo mahery kilan’ny afo HAIN-TRANO GOAVANA TENY ANOSIBE ANDREFANA (89) 19 janvier 2021 Namaly ny hetahetan’ireo voafonja ao Antsiranana DEPIOTE JOCELYNE MAXIME (76) 19 janvier 2021 Lehilahy 04 mpihaza sokatra an-dranomasina tratra NOSY ANTANIFALY - ANALALAVA (72) 19 janvier 2021